Umdibaniso wamaGcisa aMdaka ngamaHashe kunye noKhenketho oluMangalisayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Umdibaniso wamaGcisa aMdaka ngamaHashe kunye noKhenketho oluMangalisayo
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
by URita Payne - okhethekileyo kwi-eTN
Ubugcisa obumangalisayo budibanisa amahashe kunye nokuhamba
Ibhalwe ngu URita Payne - okhethekileyo kwi-eTN
Omnye wabahlobo bam wandazisa kumsebenzi wegcisa laseBritane elinetalente, uMarcus Hodge. Undithumelele imifanekiso yomsebenzi wakhe, kwaye bendonwabile yimizobo yakhe emangazayo necacileyo yamahashe, yeenkomo, neyeenkomo ezenze ukuba umntu azive ukuba angatsiba aphume kwilaphu.
Igcisa linomboniso wedwa oza eOsborne Studio Gallery ngenyanga ka-Okthobha.
Eyona nto kugxilwe kuyo kulo mboniso lihlabathi lehashe elisuka kuhambo lomculi kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Yayingumakhulu notatomkhulu womzobi owaluphembelela uthando lwakhe lokuphuma aye kuhlola ilizwe kuqala aze ke alibhalele ilizwe ngobugcisa.
Ndandinomdla kwaye ndafuna ukwazi ngakumbi ngemvelaphi yakhe. Ndifumanise ukuba uHodge, owazalwa ngo-1966, uvelise uluhlu lomsebenzi omangalisayo ophefumlelwe zihambo zakhe ezisuka eAndalucia zisiya eIndiya.
Abathandi bezobugcisa baya kuba nakho ukujonga imizobo kaHodge kumboniso wakhe wedwa oza kubakho Igalari yeOsborne Studio ukusukela nge-5 ukuya ku-Okthobha ka-28, 2021. Le ngqokelela izisa imifanekiso evela kuhambo lomculi kule minyaka mibini idlulileyo kwaye iphonononga umhlaba wehashe, ukusuka kumahashe aseMarwari eRajasthan, amahashe esekisi angamazwe aphesheya eMonaco, ukuya kwiindawo zamahashe zaseArabia. yoMbindi Mpuma.
UHodge wakhuliswa ngumakhulu notatomkhulu wakhe ochithe iminyaka emininzi eIndiya, kwaye bawutshisa umdla wakhe wokuba aphume aye kuhlola ilizwe. Owona mthombo ubalulekileyo wokhuthazo kulo mboniso yayikukuboniswa kweenkamela zangoNovemba ePushkar, eRajasthan, elinye lawona mava okuhamba phambili eIndiya, umboniso kwinqanaba le-epic. Uye wachaza indlela lo mboniso owenzeka ngayo: “Kwavela ithuba lokuba ndibonise iqela lomsebenzi ne studio saseOsborne apho ndibenomboniso wedwa wangaphambili. Bendikhe ndaya kaninzi eIndiya kule minyaka idlulileyo kwaye bendindwendwela idolophu yasePushkar ngexesha lokulunga kweenkamela, amatyeli amane okanye kahlanu.
“IPushkar yidolophu entle encinci, ingcwele kakhulu kumaHindu, egqobhoza ebomini kumdlalo wenkamela waminyaka le. Ungavuya kukonwaba ezitalatweni kodwa ubuyele kwindawo ethe cwaka yophahla xa kufanelekile. Indawo entle yokonwabela iyantlukwano enkulu kunye netempo. ”
"Kodwa phambi kokuqala kobhubhane bendindwendwele i-El Rocio e-Andalucia apho banomnye umnyhadala omkhulu, kwakhona kunye namakhulu amahashe nabantu abavela kwimimandla eyahlukeneyo."
Emva kweminyaka emihlanu efunda ubugcisa be-Old Master ePalma, eMallorca, uHodge wenza igama lakhe njengomzobi womzobo. Uqale waya e-India ngo-2000. Olu hambo yayikukuqala kothakazelelo olunzulu nge-India, ngenxa yenkcubeko yayo, ubume bayo kunye nomgangatho wayo wokomoya. Nangona umboniso wakhe ozayo unomxholo wamahashe, isitayile sakhe sihlala siguquka ukuze sibe nesibindi kwaye silula, ngamanye amaxesha ukupeyinta okomfuziselo kunika indlela yokuthintela.
Imizobo ihlala ijonge izilwanyana kunye nabantu, uyilo kunye nokuma komhlaba. NgokukaHodge, "umxholo uyakhuthaza kodwa eneneni kukulingana phakathi kwawo kwaye uwusebenzise njengeqonga lokwenza isiphumo sopopayi. Ukwenza umphezulu kunye nokuqina kwepeyinti kusebenze kubaluleke njengokumela umfanekiso kwaye xa uphumelele kukho imvisiswano phakathi kwezi zinto zimbini. ”
UHodge uthi uqhubeka nokubuyela kumxholo wamahashe kuba uhlala efumana into enomdla kwaye iheha ngokubonakalayo ngawo - ukungqubana okumangalisayo kobuhle kunye nobuchule boomatshini. Ngaphandle kotshintsho lwesitayile, owona mxholo unyamezelayo, oyintloko yi-India. Uthi, “Ubuchule bokupeyinta buhamba buye kummangaliso buye kwi-abstract kwaye buyela emva kuba amava amaninzi onawo apho, afuna impendulo eyahlukileyo. Isilwanyana esihle okanye imbonakalo yomhlaba ifuna ukuba ndiipeyinte ngokuthembekileyo kwaye ndizame ukuphinda ndenze kwakhona kumzobo owanelisayo ngokwasemzimbeni nangokwenyani nangokunyaniseka komxholo lowo. ” Eminye imixholo, enje ngembali ye-Gateway yase-India okanye uBreaking the Cycle uthotho lwemizobo evela e-Varanasi, ifuna indlela eyahluke mpela. Yiyo le nto igcina amava ephila kwaye enomdla kuye.
Nangona umsebenzi wakhe ugxile ikakhulu eIndiya nase-El Rocio eSpain kukwakho nemizobo embalwa evela eFrance apho kuhlala khona utata wakhe (naye abe ligcisa). UHodge uyalahla nasiphi na isindululo sokuba umboniso unokubhenela kuphela kubantu abatyelele eIndiya. “Andinathemba lokuba. Imizobo inokonwatyelwa kokubini kwinqanaba lokumelwa kunye nokupeyinta kungakhathalelwanga motif. Ukutshona kwelanga okuhle kukutshona kwelanga okuhle naphi na apho kwenzeka khona. ”
UHodge waqala ukupeyinta xa wayefunda kwisikolo sobugcisa bemveli eMallorca xa wayeneminyaka engama-25. “Ndichithe iminyaka emihlanu ndifunda kumzobi omangalisayo uJoaquim Torrents Llado. Ngoku ndifundisa iiklasi ezimbalwa ngeveki kwisikolo sobugcisa ke ngethemba lokudlulisa ezinye zazo. Uninzi lwabaculi abahlukeneyo banomdla kum. Kodwa ndicinga ukuba bonke babelana ngomgangatho abawusebenzisayo ngepeyinti ngendlela ecacileyo nesimahla. Okwangoku ndonwabela ubugcisa bukaMughal baseIndiya, buziswe ngakumbi xa uqala ukufunda ngabalinganiswa abakubo. ”
Abo bangakwaziyo ukutyelela umboniso ngobuqu banokubona imifanekiso kwiwebhusayithi yegalari yaseOsborne kwaye Indawo yewebhusayithi kaHodge .
Xa ebuzwa malunga nezicwangciso zakhe zexesha elizayo uHodge uthi: “Ndicinga ukuba, xa kubonakala kusengqiqweni, ukubuyela e-India kwaye ndiqhubeke nokusebenza apho ndibone ukuba kwenzeka ntoni. Andithandi ukwenza izicwangciso kakhulu, kodwa ukufumana indawo ekutsalela umnxeba kwaye ndivulele nantoni na eyenzekayo. ”
URita Payne - okhethekileyo kwi-eTN
Isikhululo seenqwelomoya esidumileyo eHawaii sifumana ingqesho eyandisiweyo kuluntu ...